«Na Jesoa aza !» -
AccueilTresaka«Na Jesoa aza !»
«Na Jesoa aza !»
07/12/2017 admintriatra Tresaka 0
Malaza amin’ny fitsikerana sy ny fanakianana isika Malagasy, ary tena mahay manenjika ny hafa raha tsy hiteny afa-tsy ny fanenjehana Karana sy Sinoa ary Vazaha, saingy tsy mahay mitsara tena sy mijery fitaratra. Maty henjika daholo rehefa mpitondra, manomboka amin’ny filoham-pirenena, ny minisitra, ny filohan’ny Antenimieran-doholona, ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny filohan’ny CENI, ny praiminisitra, sns. « Na Jesoa aza » no teo amin’ny toeran’ireo olona voalaza rehetra ireo dia azo antoka fa mbola niharan’ny fanenjehana hatrany.
Izao anefa no mahagaga. Olona efa teo amin’ny fitondrana, ary efa nitana andraikitra teto amin’ny firenena avokoa no lehiben’izany tsikera sy fanakianana izany, tahaka ny hoe nandeha sy nizotra tsara tsy misy nipika mihitsy ny fiainam-pirenena nandritra ny fotoana nahateo azy ireo, kanefa izy ireo indrindra no tompon’antoka amin’izao fahantrana sy fahavoazan’ny firenena izao.
Vao misy volavolan-dalàna iray mipoitra, dia efa tsikera sy fandavana avy hatrany, kanefa ireo fatra mpanda indrindra no mampiasa ilay lalàna hiarovany ny tenany aty aoriana. Vao misy fanavaozana, na fanatsarana fomba fiasa dia efa fitokonana sy grevy no atao, tsy mahafantatra akory izay vontoatin’ilay fanapahan-kevitra. Vao mandre fotsiny fa mety hasiam-panovana ny Lalàm-panorenana dia efa mitabataba sy mamorona izao tsaho rehetra izao ny mpanao politika.
« Na Jesoa aza » no hitondra ity Madagasikara ity, dia hinoana fa tsy maintsy hahazo vava ratsy sy fanenjehana amin-dRamalagasy. Variana mitsikera sy manakiana isika fa tsy mahay manangana. Jereo fotsiny ny zava-misy e! Tsy nanao afa-tsy ny nandrodana sy nandoro ary nandrava isika nanomboka ny taona 1972. Singapour, dimy taona taorian’i Madagasikara vao nahazo Fahaleovantena indray no lasa lavitra, ary tena nilaozany taonjato telo isika raha kely indrindra, ka nahatonga ny vazivazy nanao hoe: “raha isika Malagasy no afindra toerana aty Singapour, tapitra may sy mirodana avokoa ireo building rehetra ireo!”.